Ny zava-misy ankehitriny amin'ny fanafarana sy fanondranana any Shina
Tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2020, nidina 6,4% ny fanafarana sy fanondranana ny fireneko, izay nihahenjana kokoa tamin'ny isa 3,1 isan-jato tamin'ny roa volana lasa. Tamin'ny volana aprily dia nitombo 5,7 isan-jato ny tahan'ny fitomboan'ny varotra vahiny tamin'ny telovolana voalohany sy ny fitomboan'ny ...
Ny fampiasana sy ny fitandremana ny [bis (2-chloroethyl) etera (CAS # 111-44-4)]
[Bis (2-chloroethyl) etera (CAS # 111-44-4)], ny dichloroethyl etera dia ampiasaina ho mpanelanelana simika amin'ny famokarana fanafody famonoana bibikely, fa indraindray azo ampiasaina ho solvent sy mpanadio koa izy io. Manelingelina ny hoditra, ny maso, ny orona, ny tenda ary ny havokavoka ary miteraka tsy fahazoana aina. 1. Ho ...
Nanaiky resadresaka nifanaovana tamina programa fandaharana fanadihadiana “Brand Power” an'ny CCTV ny orinasanay.
Tamin'ny volana martsa 2016, nanaiky resadresaka nifanaovana tamina programa fandaharana fanadihadiana “Brand Power” an'ny CCTV ny orinasanay. Ity tafatafa ity dia natolotry ny mpampiantrano CCTV malaza Wang Xiaoqian, ary nampahafantatra ny filôzôfia momba ny fampandrosoana sy ny fomban'ny asa. Shijiazhuang Chenghexin Chemical Co., Ltd ....